Toy ny teo aloha dia feno hatrany ny toeram-pivarotana rehetra saingy tsy maintsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana napetraka kosa. Tsy maintsy arotava avokoa ny mpiantsena sy ny mpivarotra rehetra. Misy ihany koa ny toerana natokana hanasan-tanana amin’ny rano sy savony ho an’ny roa tonta toy ny hita eny amin’ny tsenan’Andravoahangy. Ezahina hajaina hatrany ihany koa ilay elanelana 1 metatra ho fitandroana ny fahasalamam-bahoaka. Izany no hatao moa dia hiarovana amin’ny fiparitahan’ny tsimokaretina coronavirus. Tsiahivina moa fa olona an’arivony avy amin’ny faritra maro no tonga miantsena na mivarotra ao Mahamasina isaky ny alakamisy, antony tsy maintsy nametrahana ireo karazana fepetra ireo. Ho an’ireo mpivarotra dia tsy vitsy amin’izy ireo no mivatsy ireny gel fanosotra amin’ny tanana famonoana mikraoba ireny ho fiarovana amin’ny fiparitahan’ny aretina amin’ny alalan’ny vola raisina.